ဖူးနုသစ်: ရှန်ဟိုင်း ဘန်း
ရှန်ဟိုင်းက ပြန်ရောက်တာ သုံးလတောင် ပြည့်ခါနီးပါပြီ။ အလုပ်တောင် ထွက်ပြီးလို့ နောက်တစ်ပတ်ဆို ရန်ကုန်ကို အပြီးပြန်ဖို့ ပြင်ဆင် ထုတ်ပိုးနေပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ရှန်ဟိုင်းရောက်တုန်းက ဘလော့ခ်ပေါ်တင်မယ် ဆိုပြီး အသေအချာ ရိုက်လာတဲ့ ဓာတ်ပုံ ဗွီဒီယိုကလေးတွေ သတိရလို့ ဒီပို့စ်ကို ရေးဖြစ်သွားပါတယ်။ ဘလက်ဘယ်ရီ က ကင်မရာနဲ့ ရိုက်လာတဲ့ ဓာတ်ပုံဗွီဒီယိုတွေမို့ ကွာလတီ မကောင်းရင် သည်းခံကြပါ။
ရှန်ဟိုင်းကို မသွားခင် အင်တာနက်မှာ ဘယ်နေရာ သွားလည်ရမလဲ ရှာကြည့်တော့ ဘန်း (The Bund ) လို့ ခေါ်တဲ့ နေရာကို ညွှန်းကြတာ တွေ့မိပါတယ်။ ပထမဆုံး ရောက်တဲ့နေ့က တည်းခဲ့တဲ့ ကုမ္ပဏီက တိုက်ခန်းနဲ့ ဆိုရင် မန္တလေး အခေါ် နှစ်ပြ လောက်ပဲ ဝေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရောက်တဲ့နေ့က လည်ရင်းပတ်ရင်း မိုးချုပ်သွားလို့ မရောက်ဖြစ်လိုက် ပါဘူး။ စနေတနင်္ဂနွေ ပိတ်ရက်မှာ သွားမယ် ကြံပေမယ့် စနေ တနင်္ဂနွေပါမကျန် အလုပ်ဆင်း နေရတာမို့ အကြံအစည်က တော်တော်နဲ့ အထမမြောက် ပြန်ပါဘူး။
ဒါပေမယ့်လည်း ရောက်ပြီး ၁၀ ရက်လောက် အကြာ နေ့လည်ပိုင်း အလုပ်စောပြီးသွားတဲ့ တစ်ရက်မှာတော့ ဘန်းကို သွားဖို့ စိတ်ကူး ပေါ်လာပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် လေဆိပ်က မ လာတဲ့ မြေပုံတစ်ချပ်ကို ယူပြီး ထွက်လာ ခဲ့ပါတယ်။ တက္ကစီတစ်တန်၊ ရထားတစ်တန်နဲ့ စီးလာရင်း ပထမဆုံးနေ့က ရောက်ခဲ့တဲ့ ပီးပဲလ် စကွဲယားကို ပြန်ရောက်လာပါတယ်။
ပီးပဲလ် စကွဲယားကနေ ထွက်လာခဲ့ပြီး အဲဒီနားက နန်ကျင်း လူသွားလမ်း (Nanjing Pedestrian Street) ဘက်ကို လျှောက်လာခဲ့ပါတယ်။ မိုးက မဆိုစလောက် ရွာနေပေမယ့် ထီးမပါဘဲ လျှောက်လို့ရတဲ့ အနေအထားပါ။
အဲဒီကနေ တည့်တည့် လျှောက်လာခဲ့တော့ ဘန်းလို့ခေါ်တဲ့ နေရာကို ရောက်ပါတော့တယ်။ ဘန်းဆိုတာ ဟွမ်ပု မြစ်ကမ်းပါးမှာ လမ်းလျှောက်လို့ ရအောင် လုပ်ထားတဲ့ နေရာလေးပါ။ မြစ်ကမ်းပါးမှာ လုပ်ထားတဲ့ လျှောက်လမ်းက လမ်းသွယ် တစ်ခုစာ နီးပါး ကျယ်ပါတယ်။ အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကိုလိုနီခေတ်က အဆောက်အဦးတွေ၊ ခေတ်မီတိုက်တွေနဲ့ အတော်ကို လှတဲ့ နေရာလေးပါပဲ။ မြစ်ထဲမှာ သွားနေတဲ့ သင်္ဘောတွေကို ကြည့်လို့ ရသလို မြစ်တစ်ဖက်ကမ်းက တိုက်တာ အဆောက်အဦးတွေကိုလည်း လှမ်းကြည့်လို့ ရပါတယ်။ ပိတ်ကားပြင်ပေါ်မှာ ဆက်လက် ရှုစားကြပါ။ :-)
မြစ်တစ်ဖက်ကမ်းက အရှေ့တိုင်း ပုလဲ တာဝါတိုင် (Oriental Pearl Tower) လို့ ခေါ်တဲ့ ရေဒီယိုနဲ့ တီဗွီ တာဝါတိုင်ကို တခြား မိုးမျှော်တိုက်တွေနဲ့ အတူ တွေ့ရတာပါ။ ညာဖက်ထောင့်က လေးထောင့်ကွက်ကလေးနဲ့ မြင်နေရတဲ့ အဆောက်အဦးကတော့ အခုလက်ရှိ ရှန်ဟိုင်းမှာ အမြင့်ဆုံးလို့ ခေါ်နိုင်တဲ့ ရှန်ဟိုင်း ကမ္ဘာ့ ငွေကြေး စင်တာ (Shanghai World Financial Center) ပါပဲ။
အခုပုံကတော့ လူသွားလမ်းကနေ လမ်းမဘက်ကို ပြန်ကြည့်ရင် တွေ့ရတဲ့ မြင်ကွင်းပါ။ အလယ်ခေါင်က နာရီစင်ကြီးနဲ့ အဆောက်အဦးကတော့ ကပ်စတန်ဟောက်စ် လို့ ခေါ်တဲ့ အကောက်ခွန် ရုံးပါ။
အကောက်ခွန်ရုံးရဲ့ဘေးမှာတော့ ဟောင်ကောင် ရှန်ဟိုင်း ဘဏ်လုပ်ငန်း ကော်ပိုရေးရှင်း ဒါမှမဟုတ် အိတ်ချ်အက်စ်ဘီစီ (HSBC) အဆောက်အဦး ရှိပါတယ်။ အိတ်ချ်အက်စ်ဘီစီက ဆောက်ခဲ့တာပေမယ့် အခုလက်ရှိတော့ ရှန်ဟိုင်း-ပူဒုံ ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်က အသုံးပြုနေပါတယ်။
အရှေ့ဖက်ကို လှမ်းမျှော်ကြည့်တော့ တွေ့ရတဲ့ ချိုင်းနားဘဏ် (Bank of China) အဆောက်အဦးပါ။
ရှေ့ကို ဆက်လျှောက်တော့ အအေးတွေ မုန့်တွေ ရောင်းနေတဲ့ ကားပေါက်စန ကလေး တစ်စင်းကို တွေ့ရပါတယ်။
ရှေ့ကို ဆက်လျှောက်လာရင်း တွေ့ရတဲ့ မြင်ကွင်းပါ။
အပေါ်က သင်္ဘောပုံ ဆောက်ထားတဲ့ စားသောက်ဆိုင်ကလေးကို အနီးကပ် ရိုက်ထားတာပါ။ မြစ်ထဲကို လှမ်းမျှော်ကြည့်ရင်တွေ့ရတဲ့ မြင်ကွင်းတွေကို အောက်မှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
မြစ်ထဲမှာ ကုမ္ပဏီတွေက အပျော်စီးလှေတွေ မောင်းနေတာလည်း တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
ကျွန်တော် အပါအဝင် မြန်မာအများစု ဟွန်ဒိုင်းလို့ အသံထွက်ကြတဲ့ ယွန်ဒေ ကားကုမ္ပဏီက လှေပါ။
ဒါကတော့ ကိုရီးယား ကီယာ ကားကုမ္ပဏီကပါ။
တမေ့တမော လမ်းလျှောက်နေခဲ့တာ လာလမ်းအတိုင်း ပြန်လျှောက် လာတော့ မီးတွေတောင် ထွန်းနေကြပါပြီ။
ဘန်းမှာ ကင်းလှည့်နေတဲ့ ရဲကားပါ။ နန်ကျင်း လူသွားလမ်းဘက်ကို ပြန်လျှောက်ခဲ့တော့ အဲဒီဘက်မှာလည်း မီးတွေ ထွန်းနေကြပါပြီ။
လူပုံက အချဉ်ပုံပေါက်နေသလားတော့ မသိပါဘူး။ နန်ကျင်းလမ်းပေါ်မှာ ပေါက်ဖော်မ တစ်ယောက်က လူမှားသလိုနဲ့ အကြောင်လာရိုက်ပြီး အချဉ်ဖမ်းဖို့ ကြံပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အချဉ်မဟုတ်လို့ ဆောရီးပြောပြီး လစ်ခဲ့ပါတယ်။ ယွမ်ငွေတွေ နည်းနေတာ သတိရလို့ ငွေလဲတဲ့နေရာ လိုက်ရှာပါတယ်။ တိုးရစ်စ် အင်ဖော်မေးရှင်း ကောင်တာကို မေးတော့ ဘဏ်ထဲကို ဝင်သွားပါလို့ ညွှန်တာနဲ့ ဘဏ်ထဲကို ဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီအချိန်အထိ ဘဏ်က အလုပ်လုပ်သလား စဉ်းစားရင်း ဘဏ်ထဲ ဝင်ခဲ့တာ အထဲရောက်မှ ငွေလဲတဲ့စက်ကို တွေ့ရပါတယ်။ ကံဆိုးချင်တော့ အိတ်ထဲမှာ ပါလာတဲ့ စင်ကာပူ ဒေါ်လာ ငါးဆယ်တန်တွေ အကုန်လုံးကို စက်က မသိဘူး ပြောနေတာနဲ့ပဲ တပ်ခေါက် ပြန်ခဲ့ရပါတယ်။
ဘန်းရဲ့ အလှအပကို ကြည့်ချင်သူတွေ အတွက် ဗွီဒီယိုဖိုင်ပါ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Posted by ZT at 1:16 AM
Labels: ခရီးသွား, တရုတ်, ဓာတ်ပုံ
ၿပန္္ေတာ႔မယ္ဆိုတဲ႔ အေႀကာင္း၇င္း ေလးေတြ ေ၇း၇င္ ေကာင္းေလစြ။
ၿပန္ဖို႔ တြန္႔ေနတဲ႔ လူေတြ စဥ္းစား၇တာပေလ။
Yep, I also agree, read thru until the end, realized the most interesting part is 'the first sentence', sorry I deleted above comment myself. anyway, gud luck.
Vilasagga masoeyein said...
မြန်မာပြည်အကြောင်းတွေ ဖတ်ရတာ ပိုအရသာရှိမယ်ထင်သဗျ။ သွားလမ်းသာလို့ လာလမ်းဖြောင့်ပါစေဗျာ။